Iindaba - Iimpawu zezibane eziphezulu ze-bay
Ngophuhliso lwamashishini, iimveliso ezahlukeneyo kufuneka ziveliswe kwaye zilungiswe. Izibane azinakwahlulwa ukusuka kumgangatho wefektri. Ukuqinisekisa inkqubela phambili yemveliso kunye nomsebenzi wokuhlola wabasebenzi, indawo efanelekileyo yokukhanyisa iyafuneka kumasifundisane ukuhlangabezana neemfuno zomsebenzi wabasebenzi. Izibane eziphakamileyo ze-LED zisetyenziselwa ukubuyisela izibane zemizi-mveliso zamandla aphakamileyo, kwaye zisetyenziswa kwiindawo ezinzima njengokukhanya kwemizi-mveliso. Ke zithini iimpawu zezibane eziphezulu ze-bay?
1.I-LED high bay light inexesha elide lenkonzo. I-LED isetyenziswa njengomthombo oqinileyo wokukhanya okubandayo kwaye ifakwe kwi-epoxy resin. Ayinazintsilelo ezifana nokukhanya, ukubekwa kobushushu kunye nokubola kokukhanya. Izibane eziphakamileyo ze-LED zinobomi obude benkonzo engama-60,000 ukuya kwi-10 kwindawo yangoku efanelekileyo kunye nevolthi. Iiyure ezili-10,000, ubomi bezibane eziphakamileyo ze-LED zingaphezulu kwamaxesha e-10 ubude kunemithombo yokukhanya yemveli.
2. Ukhuselo lokusingqongileyo, izibane ze-bay eziphezulu ze-LED zenziwe ngezinto ezingezizo ityhefu, ngokungafaniyo nezibane zefluorescent eziqulathe imekyuri, ezinokubangela ungcoliseko, kunye nee-LED zinokuphinda zisetyenziswe. Ubume bezibane eziphakamileyo ze-LED aziqukethe i-ultraviolet kunye ne-infrared. Ngokungafaniyo nemithombo yokukhanya yesiko, ijikelezwe ziingcongconi ezininzi ezijikeleze isibane. Akukho bushushu, akukho radiation, ilitha ephantsi, umthombo obandayo wokukhanya, ukubamba ngokukhuselekileyo.
3. Ukukhanya kwe-LED kwimizi-mveliso nakwimigodi kuphezulu, kusebenza ngokuqaqambileyo okuphezulu.
4. Isibane se-bay esiphezulu se-LED samkela rhoqo amandla ombane wokuqhuba, anexabiso eliphezulu le-PF kwaye akukho kungcoliseka kwegridi.
5. Inezibonelelo zokusetyenziswa kwamandla asezantsi kunye nobunzima bokukhanya.
Njengoko sonke sisazi, into engekhoyo kwizibane ze-LED kukuba iqondo lobushushu liphezulu kakhulu. Ungayisombulula njani ingxaki yokusasazeka kobushushu kwezibane eziphezulu ze-bay?
Ubomi bezibane ze-LED ubukhulu becala buxhomekeke kwinqanaba lokusasazeka kwezibane. Eyona ndlela iphambili yokuphucula ukusasaza ubushushu kukuhambisa ubushushu obugqithisileyo obuveliswa yi-chip ngesinki yokufudumeza kunye nesinki yobushushu. Kwangelo xesha, iiparameter eziphambili ezinxulumene nokuchithwa kobushushu be-LED kukuchasana kwe-thermal, iqondo lobushushu lendawo kunye nokunyuka kweqondo lobushushu.
Ukuxhathisa kwe-Thermal yi-quotient yomahluko phakathi kobushushu obusebenzayo besixhobo kunye neqondo lobushushu lendawo yesalathiso sangaphandle esahlulwe kukusetyenziswa kwamandla okuzinzileyo kwesixhobo. Yeyona parameter ibaluleke kakhulu ebonisa inqanaba lokusasaza ubushushu.
Ubushushu bempambano bubhekisa kwiqondo lobushushu lendibano yesemiconductor yeyona ndawo iphambili yokufudumeza isixhobo se-LED. Ibonisa ixabiso lobushushu besixhobo se-LED phantsi kweemeko zokusebenza. Ukuchasana nobushushu be-chip kunye ne-phosphor kuphezulu kakhulu, kwaye ayinampembelelo kubomi besixhobo.
Ukunyuka kwamaqondo obushushu etyhubhu kunye neqokobhe-ukunyuka kwamaqondo obushushu. Ibhekisa kumahluko phakathi kobushushu bezindlu besixhobo se-LED kunye nobushushu obugcweleyo. Lixabiso lobushushu elinokulinganiswa ngokuthe ngqo, kwaye linokubonisa ngokuthe ngqo inqanaba lokusasaza ubushushu ejikeleze isixhobo se-LED. Ukuba ukunyuka kwamaqondo obushushu kuphezulu kakhulu, izinga lokugcinwa komthombo wokukhanya kwe-LED liya kuncitshiswa kakhulu.
Ukongeza, uyilo lwezibane ze-LED akufuneki ziphucule kuphela ukusebenza ngokukuko, iimfuno zokudibanisa ukukhanya kunye nokubonakala kwezibane, kodwa kunye nokuphucula ukusasazeka kobushushu kwezibane. Izinto zokuqhuba ubushushu zisetyenzisiwe, kunye nesinki yokufudumeza yenziwe ngezixhobo ze-nano. Ukuqhutywa kweshushu kwesibane kunyuke nge-30%. Ukongeza, kukho imfuneko yokusebenza okuhle koomatshini kunye nokutywina. Iradiyetha kufuneka ingabonakalisi uthuli. Ukunyuka kobushushu kwesibane se-LED kufuneka kube ngaphantsi kweedigri ezingama-30.
Ixesha Post: Sep-01-2021